Afọ 100 ka e mesịrị: Alaeze nke onye debanyere aha | Martech Zone
Afọ 100 ka e mesịrị: Alaeze nke Subscriber
Nke a bụ mgbasa ozi sitere na mbipụta May 1916 nke Popular Mechanics si AT&T na-agwa ndị nwere ike ịdenye ekwentị.
M na-echekarị otu o siri sie ike imeri egwu na ụjọ nke teknụzụ dị otú ahụ ga-abụrịrị n'oge ahụ. M na-echekwa ka esi atụnyere nnabata mgbasa ozi mmekọrịta yana todayntanetị taa.
Akụkọ ihe mere eme na-ekwughachi onwe ya.
Ekwentị, dị ka Intanet, gbanwere ndụ. Na 1926, ndị Knights nke Columbus Adult Education Committee bidoro ịjụ ajụjụ, “Ihe ọgbara ọhụrụ ọ na-emepụta ọ na-enyere aka ma ọ bụ na-emebi agwa na ahụike?"
Site na mgbasa ozi a, AT&T na-eme ka ọha na eze na-atụ egwu teknụzụ wee belata, na-akụziri ndị mmadụ etu teknụzụ siri nye ha ike.
O yiri ka enwere ike ibigharị mgbasa ozi a taa, na ịntanetị n'ahịrị:
Na mmepe nke Intanet, onye ọrụ bụ ihe kachasị mkpa. Ihe ha choro na-eto eto na-akpali ihe mepụtara, na-eduga na nyocha sayensị na-adịghị agwụ agwụ, ma na-eme ndozi na ndọtị dị mkpa.
A naghị ahapụ ụdị ma ọ bụ ego iji wulite Internetntanetị, iji mee ka ikike onye ọrụ nwee oke. Na Intaneti ị nwere usoro zuru oke n'ụwa maka nkwukọrịta. Mmụọ nke ọrụ kachasịnụ na-akpali ya, yana ị na-achịkwa ma na-achịkwa ya ikike abụọ nke onye ọrụ na onye na-eweta data. Cannotntanetị enweghị ike iche ma ọ bụ kwuo maka gị, mana na-ebu echiche gị ebe ị ga-aga. O bu nke gi iji.
Na-enweghị nkwado nke onye ọrụ, ihe niile emerela iji mezuo sistemụ ahụ abaghị uru na enweghị ike inye ezigbo ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na ejiri ọtụtụ iri ijeri rụọ Internetntanetị, ọ ga-agbachi nkịtị ma ọ bụrụ na onye nke ọzọ na-ejighị ya.
Ntaneti bu nke ndi ochichi; ọ na-eburu olu nwatakịrị na onye toro eto nwere ọsọ na nduzi. Ebe ọ bụ na onye ọrụ ọ bụla bụ isi ihe na thentanetị, Intanet bụ ọchịchị onye kwuo uche ya nke kachasị mma maka ụwa.
Ọ bụghị naanị ntinye nke mmadụ, mana ọ na-egbo mkpa niile nke mmadụ niile.
Otu narị afọ gachara, anyị ka bi n'Alaeze nke ndị debanyere aha!
Tags: at & tinternetalaeze nke onye debanyere ahaKnight nke columbusna-ewu ewu arụzidebanyere ahaekwentị